| လိင်အေးစက်ဦးနှောက် reshapes ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ သင်ယူ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုက်
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်လူကြီးအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွင်လိင်ဆိုင်ရာအခြေအနေ (သို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်) ပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုအခြေအနေသည်စစ်မှန်သောအိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဤသင်ယူမှုသည်စူပါမြန်ဆန်သောအာရုံကြောလမ်းကြောင်းကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်နှင့်လိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားကိုပြန်လည်ပုံသွင်းလိမ့်မည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ဤအရေးကြီးသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သင်ယူခဲ့ရာများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းနောင်လာမည့်အဆင့်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောနက်ရှိုင်းစွာအမြစ်စွဲနေသောအကျင့်ကိုဖျောက်ရန်ခဲယဉ်းနိုင်သည်။
အင်တာနက်ကိုမရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်တိုင်အောင်, ဆယ်ကျော်သက်လိင်နှင့်အတူရုတ်တရက်စှဲမယ့်ဦးနှောက်ကမောင်းနှင်မဂ္ဂဇင်း၌ဖြစ်စေဒီဗီဒီအပေါ်ညစ်ညမ်းမှာကြည့်, ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းသာလူကြီးများအတွက်ကြောင့်သူတို့တစ်တွေကြည့် "လြှို့ဝှကျထှကျသှား" ချင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်ကသညျဘိုးဘေး, အစ်ကိုသို့မဟုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အစောင့်အထိန်းခြင်းဖြင့် site ၏ထွက်ဝှက်ထားခဲ့သည်။ သူတို့ကပိုပြီးအလွယ်တကူလိင်တင်းမာမှုလွှတ်ပေးရန်မိမိတို့၏လူတန်းစားအတွက်နာမည်ကြီးတွေသို့မဟုတ်မိန်းကလေးငယ်များကိုစဉ်းစားရန်၎င်းတို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအသုံးပြုဖို့င်။ သူတို့အခြားလူငယ်အမျိုးသား, အမျိုးသမီးနှင့်အတူပိုပြီးအပြန်အလှန်စတင်အမျှသူတို့တစ်ချိန်ချိန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးအထိဦးဆောင်မယ့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအလောင်းတွေရှာဖွေစူးစမ်းဖို့မကြာခဏစိတ်ခံစားမှုစိန်ခေါ်မှုလမ်းကြောင်းတလျှောက်စွလိမ့်မယ်။
ယနေ့လူငယ်အများစုသည်သူတို့၏စိတ်ကူးယဉ်မှုကိုလောင်ကျွမ်းရန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုခဲယဉ်းသောညစ်ညမ်းမှုဖြင့်စတင်သည်။ သူတို့ဟာအသားအရောင်ကွဲပြားတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပျော့ပျောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့စတင်မလာပါဘူး။ ၈၀% သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတွင်မိန်းမများအပေါ်လိင်ကွဲလိင်အကြမ်းဖက်မှုများပါ ၀ င်သည်။ နာကျင်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောပစ္စည်းများသည်အထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်ကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွစေသည်၊ လူတွေကသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေပေါ်မှာတစ်ခုထက်ပိုသောအစွန်းရောက်ပစ္စည်းများကိုသူတို့၏အဖိုးများတစ်သက်တာတွင်မြင်နိုင်သည်ထက်ပိုမိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဒီ streaming hard-core ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ဦး နှောက်နှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပုံသွင်းသည်။
ဦးနှောက် porn ဖို့အဆင်ပြေအောင်ကြသည်မဟုတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်ကြောင့်ဘရော့ဘန်းအင်တာနက်များ၏ဆိုက်ရောက်ရန်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များတွင်ရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်ကြောင်း hyperstimulating ပစ္စည်း၏ဒီဆူနာမီနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အဆင်ပြေအောင်ကြပြီမဟုတ်။ လူငယ်များနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်အစီရင်ခံအဓိကကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများနေသောခေါင်းစဉ်: စိတ်ကျရောဂါ; လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်; လူမှုရေးအထီးကျန်; ဦးနှောက်မြူ; အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့် erectile မမှန်ပေမယ့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ compulsive ကြည့်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးကကိုင်တွယ်ရန်ပြောင်းလဲဘယ်တော့မှဆုချစူပါလှုံ့ဆော်ရန်န့်အသတ်လက်လှမ်းရှိပါတယ်သည့်အခါလုပ်ဖို့ဦးနှောက်ကဘာလဲ? အကောင်းတစ်လမ်းအတွက်နှင့်မ - တချို့ကဦးနှောက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမတော့ porn ကို အသုံးပြု. နှင့်အော်ဂဇင်မှ masturbating လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုဖြေရှင်းနှင့်အမျှစိတ်ကျေနပ်စရာက register လုပ်သွား။
ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ် overstimulating စောင့်ရှောက်လျှင်ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ငါတို့တဘက်၌အလုပ်လုပ်စတင်လိမ့်မည်။ ဒါဟာရန်၎င်း၏တုန့်ပြန်လျော့ကျလာခြင်းဖြင့်အလွန်အကျွံ dopamine ဆန့်ကျင်ကိုယ်တိုင်ကကာကွယ်ပေးသည်, ကြှနျုပျတို့လျော့နည်းနည်းဖြစ်ခဲ့သလိုကျေးဇူးတင်မှုခံစားရသည်။ ဤသည် dopamine မှ sensitivity ကိုလျော့နည်းသွားအလှည့်အတွက်ရေရှည်တည်တံ့သောအပြောင်းအလဲကဦးနှောက်၏အမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမောင်းသောဆွဘို့အကာ ပို. ပင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ရှာဖွေမှု, သို့အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်တွန်း။ သူတို့က reverse ဖို့စိန်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
<< မှတ်ဉာဏ်နှင့်သင်ယူခြင်း Porn & အစောပိုင်းလိင်ဆိုင်ရာမိတ်ဆက်